सिल्टल: मालवेयर बाट तपाईको प्रणाली कसरी सुरक्षित राख्ने?
के तपाईंलाई थाहा थियो कि उपसर्ग मर्म (मैलवेयरमा) भनेको स्पेनिश सहित सबै ल्याटिन भाषाहरूमा खराब छ? यसले तपाईंलाई धेरै बताउँछ। मैलवेयर वा दुर्भावनापूर्ण सफ्टवेयर साइबर अपराधीहरूले प्रयोग नगर्ने अप्ठ्यारो कम्प्युटर प्रयोगकर्ताहरूलाई ह्रास हटाउन प्रयोग गरिन्छ। तपाईले व्यक्तिगत डेटा फिश गर्न प्रयोग गरिरहेको घुसपैठ कार्यक्रमको रूपमा मालवेयरको बारेमा सोच्न सक्नुहुन्छ - लगइन विवरणहरू + पासवर्डहरू, क्रेडिट कार्ड विवरणहरू, बैंक जानकारी, सोशल सुरक्षा नम्बर - जुन त्यसपछि पहिचान (चोर चोरी), पैसा र अन्य पापी गतिविधिहरूको लागि प्रयोग गरिन्छ। मालवेयर कुनै पनि फारममा हुन सक्छ। यो एक ट्रोजन घोडा, भाइरस, ransomware, कीड़ा वा स्पाइवेयर हुन सक्छ।
माथि उल्लिखित दिशानिर्देशहरूको अनुसरण गर्नुहोस्, अर्म ग्राहक एग्प्राइजर प्रबन्धक सेल्टल्ट द्वारा परिभाषित गरिएको दिशानिर्देशलाई पछ्याउनुहोस्, र तपाईंको व्यक्तिगत जानकारी सधैँ सुरक्षित हुनेछ।
मैलवेयर तपाईंको विरुद्धमा कसरी प्रयोग गरिन्छ?
धेरै तरिकाहरू छन् जो ह्याकर वा साइबर आपराधिकले मैलवेयरलाई हटाउन सक्छ। एक फिसिङ ईमेल पठाउने सबै भन्दा साधारण तरिका हुनेछ। यो इ-मेल हानिकारक लाग्न सक्छ, तर यसले प्राय: लिंक वा कार्यान्वयनयोग्य फाइल समावेश गर्दछ जुन यदि तपाईको कम्प्युटर प्रणालीमा मालवेयर स्थापनामा क्लिक गर्नुपर्दछ।
एकपटक यो मालवेयरले तपाइँको पीसीमा पत्ता लगाउँदा, यसले तपाईंको डेटा इन्क्रिप्सन र हानिकारक सुरक्षाका लागि सुरक्षा प्रणालीको जाँच गर्दछ। यदि त्यहाँ प्रणालीमा ठाउँहरू छन् भने, त्यसपछि मालवेयरले निजी डेटा चोर्ने बेलामा आपरेशन रोक्न आक्रामक रणनीतिहरूको संयोजन प्रयोग गर्दछ। उदाहरणका लागि, तपाईको ब्राउजरले धेरै ट्याबहरू खोल्न सक्दछ बिना तपाईं यो गर्न चाहानुहुन्छ। कहिलेकाहीं, तपाईंले भूत अडियो (आवाज क्लिपहरू तपाईंले स्वैच्छिक रूपमा खोल्न चाहनुभएका ट्याबहरू प्ले गर्दै हुनुहुन्छ)। मालवेयरले तपाईंको पासवर्डहरू कसरी थाहा छ? खैर, तिनीहरूले कुञ्जीलगिङ भनिने डेटा क्याप्चर प्रविधि प्रयोग गर्छन्। Source - kanger tank pro tank2burnt.यो पद्धति खातामा लग गर्दा सबै कुञ्जीहरू थिच्दछ। त्यो मालवेयरले तपाइँको सामाजिक सुरक्षा नम्बर, पिन, र पासवर्डहरूलाई कसरी पहिचान गर्दछ।
मैलवेयरको खतरा वास्तविक हो। वास्तवमा, सफ्टवेयरले पत्ता लगाएको छ कि कुन चिन्ह पत्ता लगाउन कठिन हुन्छ र पहिचान चोरी र अन्य साइबर अपराधहरूको घटना बढ्न सक्छ। यद्यपि घन्टी नगर्नुहोस्। यस खतराबाट आफूलाई बचाउन धेरै तरिकाहरू छन्।
मैलवेयर घुसपैठबाट कसरी बच्न
यसले सुरक्षित खेल्न र अलर्ट हुन गणना गर्दछ। यो मनमा संग, निम्न सल्लाहहरू तपाईंलाई हानिबाट टाढा राख्नुपर्छ:
(2 9) लिंकहरू वा खुला संलग्नकहरू वा कार्यान्वयनयोग्य फाइलहरूमा क्लिक नगर्नुहोस् जुन जसलाई प्रेषक तपाइँ तपाइँ थाहा छैन वा नियमित रूपमा कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ।
(2 9) एन्टिभायर सफ्टवेयरको नवीनतम संस्करण डाउनलोड, स्थापना र अद्यावधिक गर्नुहोस्, स्प्यावेयर विरोधीमा त्यसपछि एक फायरवाल सेट अप गर्नुहोस्। एंटीवायरस सफ्टवेयरको फटाएको संस्करणहरू प्रयोग नगर्नुहोस्।
(2 9) ब्राउजरको स्वत: बचत सुविधा प्रयोग गर्न नदिनुहोस्। यदि तपाईं ब्राउजरद्वारा पासवर्ड सम्झनका लागि प्रचारित हुनुहुन्छ भने 'कहिल्यै' क्लिक गर्नुहोला। तपाईंले यसलाई प्रयोग नगरेसम्म तपाइँको पीसी लक गर्नुहोस्।
(2 9) सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँ आफ्नो पीसी, ल्यापटप वा ट्याब्लेटमा कार्यक्रमहरूको नवीनतम संस्करण प्रयोग गर्नुहुन्छ। जस्तो कि, विकासकर्ताहरु खराब मान्छे को राख्न को लागी नवीनतम सुरक्षा उपाय शामिल छ।
आफूलाई आफैलाई मालवेयरको अर्को पीडित हुन अनुमति नदिनुहोस्। कहिलेकाँही तपाईंको एंटीवायरसले सन्देश 'खतरा पत्ता लगाइएको' सँग सञ्झ्याल पप गर्न सक्दछ। यदि त्यसो भए तापनि तपाईंको ईमेल वा पाठमा लिंक पठाइएको छैन। यसलाई बेवास्ता गर्नुहोस्। तपाईं सुरक्षित हुनुहुनेछ।